ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် Synephrine HCL လုပ်ငန်းခွင်ပါသလား
1 ။ Synephrine HCL (5985-28-4) အချက်အလက်
2 ။ Synephrine ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
3 ။ Synephrine (5985-28-4) ကဘာလဲ?
4 ။ Synephrine HCL အမှုန့်များ၏လှုပ်ရှားမှု၏ယန္တရား
5 ။ Synephrine ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများ
6 ။ Synephrine ၏အလားအလာဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
7 ။ Synephrine အကြံပြုအသုံးပြုမှု
8 ။ ဆွေးနွေးမှုများအတွက်ထိပ်တန်းအကြောင်းအရာများ: သလိုမျိုးကက်ဖိန်းဓာတ် vs Synephrine
9 ။ Synephrine ဖြည့်စွက်အွန်လိုင်းဝယ်ယူ
10 ။ Synephrine (5985-28-4) ရက်နေ့တွင်နိဂုံး
Synephrine HCL (5985-28-4) အချက်အလက်
Synephrine (5985-28-4) အများအားအဆိုပါဖြည့်စွက် Synephrine HCL ဖွဲ့စည်းရန်ဖို့အသုံးပြုကြောင်းတစ်ခု alkaloid ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးတွင်အဆိုပါ Synephrine အချက်အလက်များ, Synephrine သမိုင်း, လုပ်ဆောင်ချက် synephrine HCL ယန္တရား, synephrine နှင့် synephrine အကြံပြုပါသည်၏ synephrine, အလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုး / အန္တရာယ်များ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများပါဝင်သည်။
များအသုံးပြုမှု Synephrine (CAS: မသန်စွမ်း Synephrine အဖြစ်လူသိများ 5985-28-4, သို့မဟုတ် p-Synephrine) နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှပြန်စတငျနှင့်ဇာတိတရုတ်နိုင်ငံသို့ပြန်ခြေရာကောက်နိုင်ပါတယ်။ Synephrine ၏ဆေးဖက်ဝင်တန်ဖိုးကိုခဲ့သည် ဒါဟာပထမဦးဆုံးထိုကဲ့သို့သောပျို့ခြင်းနှင့်ဝမ်းချုပ်အဖြစ်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းရောဂါကုသရန်အသုံးပြုရှိရာဒေသတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ရှေးဟောင်းဘရာဇီးအိပ်စက်မှုလျော့ကျခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်တက်ခြင်းတစ်ဦးဆေးတစ်လက်အဖြစ် Synephrine ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အောက်ပါ Synephrine သုံးစွဲဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူကိုလူတိုင်းဓာတု (ခါးသောလိမ္မော်ရောင်အသီး) မှဆင်းသက်လာသောအနေအသီးအကြောင်းကိုသိသင့်သောဘုံအချက်များကိုအချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
ဒီအသီးလည်းသူတို့ကို ephedrine ဖြစ်ခြင်းတို့တွင်အသည်အခြားဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ အဆုံးစွန်သောပစ္စည်းဥစ္စာများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုသို့သော်အနည်းငယ်သာဖြစ်ပါတယ်။
အစဉ်အလာ, ခါးသောလိမ္မော်ရောင်ပျို့, ချုပ်နှင့်ရင်ဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ မြေထဲပင်လယ်အတွင်းရှိကရင်ပူပြုမူဆက်ဆံကိုယ်အလေးချိန်မြှင့်တင်ရန်နှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုလျော့ချဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်း၏ရေနံကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူတစ်ခါတစ်ရံအရေပြားမှလျှောက်ထားခဲ့ကြပေမယ့်အများအားဖြင့်ယင်း၏ထုတ်ယူပုံစံများတွင်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Synephrine အမှုန့်ရှည်စွာပြုလုပ်ရန်ဆင်တူသောအခြားတ္ထုများအဘို့ရောထွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ရှုပ်ထွေးမှုများပင်အချို့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့သိပ္ပံနည်းကျဂျာနယ်များကခက်ခဲဘယ်မှာသင့်လျော်စွာဒီဓာတုခွဲခြားဖို့တည်ထောင်ရန်ရှာတွေ့နိုင်အောင်လေးနက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပေမယ် Synephrine ထံမှသေးကွဲပြားခြားနားသောဝတ္ထုများအချို့မှာအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်:
ခါးသောလိမ္မော်ရောင်ထုတ်ယူ။ ဤသည်အဓိကအား Synephrine ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်များစွာသောလူနေဆဲဒီဓာတုထက်အခြားကိုသတိထားပါမဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်ဟာသူတို့ရဲ့သည် Modes ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလွန်ကွဲပြားခြားနားသေး Synephrine ဆင်တူကြောင်းထုတ်ယူအခြားတ္ထုများရှိမတည်ရှိ။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ခါးလိမ္မော်ရောင်အမျိုးမျိုးသောရောဂါများကုသမှုများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်အဖြစ်လူသိများနှင့်ဤရောဂါ၏ကုသမှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်ဓာတုပစ္စည်းကို p-Synephrine ထံမှကွဲပြားခြားနားကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။
Phenylephrine။ ဤသည်ဓာတု Synephrine မှဖွဲ့စည်းပုံအလွန်ဆင်တူဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဟာသူတို့ရဲ့ Modes သာခြားပြီးနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ Synephrine thermogenesis မှတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်တိုးတက်အောင်အသုံးပြုသည်နေစဉ်, phenylephrine အဓိကအားတစ်ဦးနှာခေါင်း decongestant အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ အဆိုပါဓာတု phenylephrine ကိုလည်းစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအတွင်းမျက်စိရဲ့ကျောင်းသား dilate မှခွဲစိတ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။ Phenylephrine ဒြပ်ကိုဖန်ဆင်းသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Synephrine, စက်ရုံကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူမှရရှိသောဖြစ်ပါတယ်။
Ephedrine။ ခါးလိမ္မော်သီးသောအသီးလည်းဒီ Ephedrine ၏သိသာထင်ရှားသောသိုက်များတွေ့ရှိထားသည်။ Ephedrine ဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့လှုံ့ဆော်နှင့်သူ၏အသုံးပြုမှုကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စွဲလမ်းဖြစ်သကဲ့သို့ထိန်းချုပ်ရပါမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါလှုံ့ဆော် ephedrine ၏ဖွဲ့စည်းပုံ Synephrine ၏ဆင်တူသည်, ဤအဓိကအားနှစ်ခုဓာတုပစ္စည်းများရှုပ်ထွေး bit နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ephedrine ၏အသုံးပြုမှုကိုအထူးသဖြင့်သင်သည်မှန်လျှင်, လူသားက၎င်း၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများအတွက်နေရာအများအပြားအတွက်တားမြစ်သည် Synephrine ယူ ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Synephrine ၏အသုံးပြုမှုကိုမဆိုအလားတူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသယ်ဆောင်မထားဘူး, ထိုသို့အရှင် ephedrine နှိုင်းယှဉ်ပါကတစ်ဦးပိုမိုလုံခြုံ option ကိုဖြစ်စဉ်းစားသည်။
လက်ရှိ Synephrine အသုံးပြုမှု
လက်ရှိတွင် Synephrine နှင့် Synephrine ဖြည့်စွက် သူတို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်၏တိုးတက်မှုများအတွက်ဖြစ်ခြင်းတို့တွင်အရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနေကြသည်။ အဆိုပါလှုံ့ဆော်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပိုလျှံအဆီကြွက်သားများဖွဲ့စည်းရန်ပြိုပျက်နေသောမှတဆင့် thermogenesis ၏ဖြစ်စဉ်ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်တစ် leaner ကောင်းစွာ-built ကြည့်ချမှတ်ဖွငျ့ဤတုံ့ပြန်မှု။ အဆိုပါလှုံ့ဆော်ကိုလည်းလူတွေကျန်းမာအစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်သင့်လျော်သောဇီဝြဖစ်ကူညီပံ့ပိုးရန်ကူညီပေးသည်။
Synephrine ကိုဘယ်လိုစိတ်ချ HCL အမှုန့်?
အခြားစိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့ Synephrine HCL အမှုန့်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကျယ်ပြန့်သံသယမရှိခဲ့ပါ။ မူးယစ်ဆေးအကြိမ်ကြိမ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးထိုသို့တဦးတည်းသင့်လျော်သောသောက်သုံးသောကိုအသုံးပြုသည်အထူးသဖြင့်လျှင်အန္တရာယ်ဖြစ်တွေ့ရှိထားပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်လှုံ့ဆော်အသုံးပြုမှုပြီးနောက်ဆုံးကျယ်ပြန့်မျှော်လင့်ဘေးထွက်ရလဒ်မကြာခဏအစာရှောင်ခြင်းပုံမှန်မဟုတ်သောနှလုံးခုန်နှုန်းသည်ဖြင့်လိုက်ပါသွားသောသွေးတိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် Synephrine ၏အသုံးပြုမှုကိုကွဲပြားခြားနားသောဘေးထွက်ရလဒ်တွေကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ကဈေးကွက်ထဲမှာယနေ့ဖြစ်ကြောင်းသိသာစွမ်းဆောင်ရည်-တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးမှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ option ကိုမှန်ကန်စေသည်။
သို့သော်အချို့လေ့လာမှုများကဖိန်းဓာတ်၏တစ်ဦးပေါင်းစပ်ပြသခြင်းနှင့် synephrine HCL အမှုန့် အလားအလာဆိုးဝါးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေဖွယ်ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာအခြားသုတေသီများထိုကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ခြေထွက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဒီနေရာကိုကြောင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံအကြောင်းကိုတွေ့မြင်သွားနေကြသည်။
FDA က Synephrine စားသုံးမှုကိုရည်မှတ်မဆိုသတိပေးထုတ်ပေးမထားပါဘူး။ တကယ်တော့အချို့နိုင်ငံများရှိ, ephedrine ၏အရပျ၌ Synephrine ၏အသုံးပြုမှုကိုအလွန်အမင်းအားပေးတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အလွန်အစွမ်းထက်လှုံ့ဆော်သောအရာ ephedrine တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမကြာခဏထမြောက်တော်မူသောဘေးကင်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားများနှင့်တိုးမြှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းမှာတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှေ့ပြေးစေသည်။
အဝလွန်ကနေအပြုသဘော synehrine (5985-28-4) ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Get
Synephrine HCL အမှုန့်ရဲ့အသုံးပြုမှုများပြားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ အနည်းငယ်အနုတ်လက္ခဏာသူတွေကိုရှိပါတယ်နေစဉ်, လူအများစုကဖြည့်စွက်သူတို့ကိုပိုလျှံခန္ဓာကိုယ်အဆီဆုံးရှုံးဖို့လိုသူအထူးသဖြင့်သူတို့အားအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးခဲ့တယ်ဘယ်သို့သောအားဖြင့်ကျေနပ်ပြီ။ သူတို့ကအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်ဟုပြောသောအရာတို့ကိုအချို့သည်:
ဂျိမ်းကို Shaw : ဂျိမ်း Shaw ကလီဗာပူးလ်သည်အင်္ဂလန်တွင်နေထိုင်သူတစ်ဦး 44 နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပါသည်။ သူကယခုတွင်ငါသည်အချို့သောအချိန်များအတွက်အဝလွန်ခဲ့ကြရတယ် "ဟုဆိုနှင့်ကျွန်မစောစောပိုင်းသုံးဆယ်ကာလအတွင်းခဲ့သောကောင်းစွာ-built ခန္ဓာကိုယ်သတိရသည့်အခါပြဿနာအထူးသဖြင့်ငါ့ကိုအများကြီးအလေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်လည်းယခုအကြောင်းကိုငါးနှစ်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားခံစားနေရပြီးပါတယ်, ငါ့ပြဿနာပိုဆိုးလာနိုင်အဖြစ်အမြဲတမ်းဖြည့်စွက် အသုံးပြု. ကိုကွောကျရှံ့ပြီ။ " Yohimbine: ရောင်းမည်အပေါ် + သက်ရောက်မှုအသုံးပြု + Yohimbine ဖြည့်စွက်
"ကျွန်မပထမဦးဆုံးတစ်နေ့လျှင် 20mg တစ်သောက်သုံးသောပေးထားမှာပါခဲ့, နှင့်ဆရာဝန်ငါ၏အခွအေနကေိုရယူသုံးထားရှိမည်အတိုင်းဤတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ကံကောင်းတာက, သေစေလောက်ဘာမျှကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်နှင့်ငါ၏ခန္ဓာကိုယ်ငါမျှော်လင့်ထားဘယ်တော့မှသောအတိုင်းအတာအထိတိုးတက်လာသည်။ ယနေ့ငါပျော်ရွှင်စွာငါ့ကိုယ်သဏ္ဌာန်နှင့် ပတ်သက်. ရှက်စရာ feeling မပါဘဲလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်။ ငါရလဒ်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်သံသယစရာမလိုဘဲကိုယ်အလေးချိန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရှိခြင်းရဲ့သူမည်သူမဆိုမှ Synephrine ၏အသုံးပြုမှုကိုအကြံပြုချင်ပါတယ်။ "သူမဟာကထပ်ပြောသည်။
Katlego Muphulukuzi: Katlego Muphulukuzi တောင်အာဖရိကကနေ 29 နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပါသည်။ Synephrine သုံးပြီးပြီးနောက်, ဤသူ Junk အဘို့ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာငါ Synephrine ဖြည့်စွက်သုံးပြီးစတင်အခြိနျ မှစ. ကျနော်တို့မှာအများကြီးဆင်းသွားလေ၏ "ဟုပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်လည်းအစဉ်အမြဲတည်တော်ရှေ့မှာထက်ပိုလုံ့လရှိသူခံစားရတယ်။ ငါဒေသခံအားကစားရုံထဲမှာစာရင်းသွင်း, ခြောက်လအတွင်း, ငါ့ကောင်လည်းအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ကြ၏, ကျွန်မပိုပြီးလှပကြည့်ရှုပါ။ "
ရှင်ပေါလု McLaughlin ချီကာဂို, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွက်ဓာတုဗေဒပညာရှင်မှာအလုပ်လုပ်တယ်: "ငါခုနစျနှများအတွက်လက်လီဓာတုဗေဒပညာရှင်ခဲ့ပါတယ်။ အစအဦး၌, ကျနော်တို့ ephedrine ရောင်းချခဲ့ကြသည်, ထိုဆိုင်ထဲတွင်အမြန်ဆုံးအရောင်းရဆုံးဆေးတစျခုဖွစျသညျ။ နိုင်ငံတော်မူးယစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့တစ်ပိတ်ပင်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာ retailing သည်ကျွန်တော်တို့ကိုမှာရောကျသောအခါအဆိုပါအခင်းဖြစ်ပွားရာသို့သျောလညျးပြောင်းလဲသွားတယ်။ ကျနော်တို့စင်ပေါ်ကနေ ephedrine ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ရသည်သို့မဟုတ်အခြားသည့်ဓာတုဗေဒပညာရှင်ကိုပိတျထားခဲ့ကြပေသည်။ ထိုနောက်မှအကြီးအမရေရာသည့်ဓာတုဗေဒပညာရှင်အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်စားသုံးကုန်စည်များ၏တဦးတည်းခြင်းမရှိဘဲပြေးမယ်လို့မည်သို့အဖြစ်ရောက်လာတယ်။
သူကကိုယ့်နေဆဲဒီအခိုက်အရှိနေစဉ်, စကားလုံး Synephrine ephedrine အစားထိုးအသစ်ကအရာကြီးတစ်ခုကိုပတ်ပတ်လည်သို့ သွား. "ကြောင်းထပ်ပြောသည်။ ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဘာမှ ephedrine ကိုအစားထိုးနိုင်မယ်ထင်ဘယ်တော့မှဒါပေမဲ့ဖောက်သည်များအနေဖြင့်တယ်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းငါ့ကိုစဉ်းစားရန်ခေတ္တရပ်တန့်ပြီးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ပြည်သူ့တစ်ခုစိုးရိမ်ဖွယ်ရာမှုနှုန်းမှာဖြည့်စွက်အဘို့တောင်းဆိုလာ၏။ ဆုံးအံ့သြစရာအရာပင်တွေကကျွန်မသူတို့သည်လည်း လာ. , ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်သုံးလို့ရတယ်ထင်ဘယ်တော့မှသူဖြစ်ခဲ့သည်။ အချို့ကပင်ဖြည့်စွက်ဝယ်ဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးညွှန်းတွေနဲ့ရောက်လာတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားမှာတစ်နှစ်ထက်လျော့နည်းအတွက်သုံးဆနှင့်ယခုမှတက်, Synephrine အဆိုပါဓာတုဗေဒပညာရှင်အပေါ်အများဆုံးဝယ်ယူဖြည့်စွက်သည်။ ငါမူးယစ်ဆေးသုံးစွဲဖို့ကိစ္စများအဝလွန်သူလူတိုင်းကိုအကြံပြုချင်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့အရောင်းမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းပြုကြမည်မဟုတ်။ ကျွန်မကြုံတွေ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဖြည့်စွက်အသုံးပြုခြင်းမှအသီးအနှံကိုရိတ်ရဟုသတ်မှတ်ဘာတဦးတည်းပါပဲ။ "ပေါလု Synephrine အပေါ်လက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ "
ရှာရုန်: "ငါ Synephrine သုံးစွဲဖို့စတင်အခြိနျမီနှင့်အပြီးငါ့အဓာတ်ပုံများ post နိုင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလိုရှိ၏။ ငါသည်ငါ့အိပ်မက်ပုံသဏ္ဍာန်ရရှိရန်နောက်ဆုံးတော့စီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြပြီးကိုယ့်အကြောင်းကိုအလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ငါရုန်းကန်ခြင်းမရှိဘဲအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့လိုသူမည်သူမဆိုမှ Synephrine အကြံပြုလိမ့်မယ်။ "
ရှင်ပေါလု Luol Dengပေါလုကျွန်မအထူးသဖြင့်အချို့အလေးချိန်ကိုသွန်းချင်သူကိုမင်းသမီးနှင့်အတူတစ်ခက်အချိန်ခဲ့တယ် "လို့ပြောပါတယ်။ ယောက်ျားနှင့်မတူဘဲသူတို့ကအမြဲတမ်းသူတို့မျိုးပွားမှုစနစ်ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါကြောက်ရွံ့ရိုသေအဖြစ် steroids သုံးစွဲဖို့တွန့်ဆုတ်ပါ။ "
သူကကျွန်မအကြာကြီး Synephrine သုံးပြီးပါတယ်, သူတို့အကြှနျုပျအဘို့ကောငျးမှနျစှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် "ထည့်ပါ။ တစ်နေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကနေမိတ်ဆွေတစ်ဦးသည်ငါ့အားကစားရုံသွားရောက်ခဲ့ပြီးနှင့်ငါ့မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို client များအပေါ် Synephrine HCL ဖြည့်စွက်ကြိုးစားကြဖို့ကျွန်မကိုအကြံပေးခဲ့သည်။ ဤသည်ဤမျှလောက်ယုံကြည်စိတ်ချငါအစောပိုင်းကပေါ်သူတို့ကိုရတဲ့ကြိုးစားခဲ့သောစတီရွိုက်နှင့်မတူဘဲတစ်ဦးဖြည့်စွက်ဖြစ်သကဲ့သို့မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။ ပထမဦးဆုံးအနညျးငယျ client များသည်ဖြည့်စွက်၏ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အရာကြွင်းလေစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်လုံလောက်သောခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာအံ့ဖှယျအမှုအလုပ်လုပ်ခဲ့, ငါကပိုမြန်စေအနည်းငယ်ကဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏သောက်သုံးသောပေါင်းစပ်အဖြစ်သူတို့ဒါကြောင့်အစာရှောင်ပိုလျှံအလေးချိန်ကိုသွန်း။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, လူတိုင်းပင်တို့သညျဤမှော်ဖြည့်စွက်ရစေချင်တယ်။ "
အမ်မလီ"ငါသူတို့နှစ်လအကြာငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူအဆိုပါ Synephrine ဖြည့်စွက်အဘို့အ Phcoker ဖို့အလွန်လေးမွတျဘူး။ ငါ့အစာစားချင်စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ပါတယ်နဲ့ကျွန်မအဖြစ်ဝေးအလေးချိန်စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်သကဲ့သို့ငါ၏အခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတချို့သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်စတင်ပါပြီ။ ဝေးလေကောင်းလေ။"
Vanessa Ford ကား : Vanessa Ford ကား Synephrine HCL ထက်မပိုကောင်းသောစိတ်ဓါတ်များအာနိသင်တိုးမြှင့်ရှိပါတယ် "လို့ပြောပါတယ်။ ပထမတော့ကိုယ်ကငါ့ကော်ဖီယူပြီးထက်မဆိုပိုမိုကောင်းမွန်ခံစားမှုမပေးမယ်လို့အားနည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့သည်ထင်။ သို့သော်အချို့ဆဋ္ဌမအသိကထွက်ကြိုးစားရန်ပြောတယ်။ ငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံးဝယ်ယူ လုပ်. နှင့်သောက်သုံးသောစတင်ပြီးနောက်အမှုအရာကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့အားကစားရုံနည်းပြဆရာအပိုလှုံ့ဆျောမှုမြို့မှရောက်လာသောရှိရာအံ့သြကျန်ကြွင်းသောလူအပေါင်းတို့မှာတခါလုံ့လရှိသူဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါနေ့စွဲဖို့ဖြည့်စွက်သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ဖွင့်, ငါပြောနိုင်သမျှသော Synephrine HCL ထက်မပိုကောင်းသောစိတ်ဓါတ်များအာနိသင်တိုးမြှင့်ရှိကွောငျးဖြစ်၏။ " အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Orlistat: ဘယ်လိုအစာရှောင်ပယ်ရှားဆီဥကိုယူနိုင်မလဲ?
Fredrick"ငါ, နောက်ဆုံးတစ်နှစ်များအတွက်မှော် Synephrine ဖြည့်စွက်ရန်ကျေးဇူးတင်စကားငါးခုကျော်ကီလိုကိုသွန်းမှစီမံခန့်ခွဲပါပြီ။ သူတို့ကိုငါမှငါ့ကိုမိတ်ဆက်သူမိတျဆှေအလုံအလောက်ကျေးဇူးတင်လို့မရပါဘူး။ သူတို့ကငါသိကိုအကောင်းဆုံးအဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုဖြည့်စွက်ပါ။ "
Synephrine (5985-28-4) လေ့အဆိုပါဖြည့်စွက် Synephrine HCL ဖွဲ့စည်းရန်ဖို့အသုံးပြုကြောင်းတစ်ခု alkaloid ဖြစ်ပါတယ်။
Synephrine အများအားဖြင့်မြင့်မားဓာတုအတွက်အာရုံစိုက်သောခါးသောလိမ္မော်ရောင်အသီးကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤအသီး alkaloid ၏တစ်ခုတည်းသောလူသိများအရင်းအမြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောသည်အခြား Citrus အသီးအပွ သံပုရာအစကတစ်မိနစ်ပမာဏရှိပေမယ့် Synephrine အမှုန့်ရှိသည်ဖို့တွေ့ပါပြီအဖြစ်။
Synephrine အကောင်းတစ်ဦးအဆီ burner သည်နှင့်အတူကူညီ ကိုယ်အလေးချိန်. ဒါဟာအစသွေးဖိအားတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်နှင့်ဤနှလုံးပြဿနာများနှင့်အတူသူတို့အားတစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
Synephrine HCL အမှုန့်များ၏လှုပ်ရှားမှု၏ယန္တရား
လုပ်ဆောင်ချက်၏ Synephrine ယန္တရားအတွက်ဖြည့်စွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအများအပြား induces သောအမျိုးမျိုးသောသက်ရောက်မှုကရှင်းပြသည်။ အောက်ပါခန္ဓာကိုယ်နောက်ဆုံးမှာကာယဗလမျက်နှာစာပေါ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားပုံသဏ္ဍာန် regains ရာမှတဆင့်သည်ဤသက်ရောက်မှုအချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
1 ။ ဇီဝြဖစ်၏ဆိုးကျိုးများ
ဒါကဓါတု၏လုပ်ဆောင်ချက်၏မူလတန်း mode ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေး thermogenesis နှုန်းတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအသည်း၌ပြစ်မှားမိသည်, အထွက်နှုန်းပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့်အားကစားသမားမြား၏အဆုံးစွန်ဆန္ဒကြောင်းကိုခန္ဓာကိုယ်မှစွမ်းအင်တိုးလာနေပါတယ်။
ဂလူးကို့စနှင့် glycogen တစ်ခုတိုးလာပျက်ပြားရှိခဲ့သည်။ ဤခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစွမ်းအင်၏သော့သတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ပျက်ပြားထို့ကြောင့်စွမ်းအင်အထွက်နှုန်းအတွက်အသစ်တခုအသွင်ပြောင်းရောက်စေဖို့မျှော်လင့်ရသည်။
ကြွက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစည်းဝေးသော sugars ဆီကူးပြောင်းမခံခဲ့ရပါ။ မည်သည့်ကာယဗလမယ်များအတွက်အဆီရရှိမှုကိုသူတို့အဘို့အလိုရှိ၏မယ်လို့ပြီးခဲ့သည့်အရာဖြစ်၏။ အဲဒီအစားလူတိုင်းပိုလျှံဆီကိုမီးမရှို့နဲ့ကြွက်သားကပြောင်းလိုသည်။
ဒီအပြောင်းလဲဖြည့်စွက်ပေးခြင်းတစ်ဦးစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုသည်လာသောအခါတစ်ဦးတိုးတက်လာသောမှုနှုန်းမှာတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဤသည် Synephrine မဆိုစွမ်းဆောင်ရည်များကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်အားကစားသမားများအတွက်တန်ဖိုးရှိသောဖြည့်စွက်စေသည်။
ကြွက်များရဲ့အသည်းထဲမှာ ATP ပစ္စုပ္ပန်၏ပမာဏကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဤသည်ပြောင်းလဲခြင်းဤကိုယ်အင်္ဂါများတွင်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုနှုန်းတိုးတက်အောင်အတွက်အကျိုးရှိပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ချက်နှုန်းတိုးတက်သောအခါ, Fats ၏ပျက်ပြားအရင်ကထက်ပိုပြီးလျင်မြန်မှုနှုန်းမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ကြွက်ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်၌ သာ. ဂလူးကို့စကိုလောင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ခန္ဓာကိုယ်အဆီများ၏မီးလောင်ရာအကူအညီပေးနေတာအတွက်အရေးပါသောအင်ဇိုင်း AMPK ၏လှုံ့ဆော်မှတဆင့်တွေ့ကြုံတတ်၏။ AMPK အတွက်တိုးကိုလည်းစွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်ချကျိုးသည်ကိုဘယ်မှာခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရခြင်းကပိုသကြားစေပါတယ်။
အဆိုပါအင်ဇိုင်းတွေ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတခု-amylase နှင့်-glucosidase ဘယျလိုမှဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှုပ်ထွေးကစီဓါတ်များအစာခြေတာဝန်ရှိသည်သောအင်ဇိုင်းတွေဖြစ်ကြသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များ၏အရေးပါမှုကို Post-မုန့်ညက်သွေးသကြားဓာတ် spikes ၏ဖြစ်ပျက်မှုအကြီးအကျယ်ဘယျလိုမှဖြစ်ပါတယ်။
2 ။ Stimulatory ဆိုးကျိုးများ
Synephrine ၏အသုံးပြုမှုကို alpha 1 နှင့် alpha နှစ်ခု adrenal receptors ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒီ phenylephrine နှင့် ephedrine ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုသိသိသာသာပြောင်ဒီဂရီအတွက်တွေ့ကြုံတတ်၏။ ဒါကတစ်ခုတိုးလာနှလုံးခုန်နှုန်းသည်အဖြစ်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားကြုံနေရတစ်ဦးချင်း၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုအလွန်အမင်းလျော့ချဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။
Synephrine များအသုံးပြုမှုတွင်လည်း neuromedin U2 receptors ၏တိုးမြှင့် activation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားမော်လီကျူးလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ hypothalamus တည်ရှိသောနှင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ဘို့တာဝန်ရှိဖြစ်ကြ၏။ Synephrine ၏အသုံးပြုမှုကိုပုံမှန်အချိန်ထက်ပိုကြာများအတွက်နိုးနိုးကွားကွားသွေးဆောင်ဖို့ hypothalamus ဖြစ်စေတဲ့အတွက် receptors လှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်
3 ။ anti-inflammatory အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
Synephrine များအသုံးပြုမှုအဲန်အက်ဖ်-kB ၏ activation တားစီးပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ပစ္စည်းဥစ္စာထိုကဲ့သို့သောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအဖြစ်ရောင်ရမ်းဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်စေအတွက်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Synephrine များအသုံးပြုမှုတွင်လည်းအကြီးအကျယ် eotaxin-1 ဟော်မုန်း၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုထိခိုက်တွေ့ရှိထားသည်။ ဒီအရောင်ကြောင်းဧရိယာမှ eosinophil များ၏လှုပ်ရှားမှုကာကွယ်ပေးသည်။
ကောင်းစွာစမ်းသပ်ချက်မှတဆင့်သက်သေထူမပေးပေမယ့်, Synephrine ၏အသုံးပြုမှုကို acetylcholinesterase ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတားစီးတွေ့ရှိထားသည်။ ဤသည်ဓာတုအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဖြစ်ပွားစေရန်လူသိများသည်။
အားလုံးမူးယစ်ဆေးသူတို့ရဲ့လူသိများဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနေချိန်မှာသင့်လျော်စွာအသုံးပြုသောအခါသူတို့သည်နေဆဲအားသာချက်များရှိသည်။ Synephrine ephedrine တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်အတှကျအသုံးပွုထားသညျ။ အဓိကကမ္ဘာကြီးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းအလောင်းတွေအဆုံးစွန်သောမူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုမှုအပေါ်တစ်ဦးပိတ်ပင်မှုချမှတ်ပြီးနောက်ဤသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အလွန်ကြီးစွာသောစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ ephedrine ၏အသုံးပြုမှုကိုအောက်ပါပေါ်ထွန်းဖွယ်ရှိကြောင်းစွဲလမ်းများအတွက်အလားအလာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် ephedrine အနေနဲ့အလွန်အမင်းကြံ့ခိုင်လှုံ့ဆော်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားကိုလှုံ့ဆော်ဖို့လူသိများသည်။ ထို့ကြောင့်, Synephrine ephedrine ဘို့နဲ့တူအစားထိုးဘို့နဲ့တူအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အောက်ပါ၏အချို့ Synephrine အကျိုးကျေးဇူးများကို ကြောင်းတလှုံ့ဆော်၏သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုကိုအပြီးအောင်မြင်ရန်သတ်မှတ်:
1 ။ Synephrine အလေးချိန်အရှုံး
ဤသည်အများအပြား ephedrine အသုံးပြုသူများပိတ်ပင်ထားမူးယစ်ဆေးယူပြီးသည့်အခါဖြေရှင်းစေချင်ကြောင်းအရှိဆုံးသိသာပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ Synephrine အလွန်အကျွံခန္ဓာကိုယ်အဆီဆုံးရှုံးမှုအကူအညီပေးနေတာအတွက် ephedrine အဖြစ်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်၏တိုးတက်မှုဖြစ်စေတဲ့အားဖြင့်အလားတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ပေါ်သည့်အခါခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စဉ်များတစ်ဦးလျှင်မြန်မှုနှုန်းမှာဖြစ်ပေါ်ခြင်း, ပိုလျှံဆီ၌မီးရှို့ရ၏။
အဆီပြိုကွဲမှု၏ဖြစ်စဉ်ကို lipolysis မှတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအဆီတစ်ရှူးတွေ့သမျှသော receptors အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပါဝငျသညျ။ ဒီအဆီပြိုကွဲတစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦးဖြည့်စွက်အသုံးမခဲ့ကြောင်းလျှင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြပေသည်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်မှုနှုန်းမှာဖြစ်ပေါ်သေချာပါလိမ့်မယ်။
ပိုလျှံအဆီဖယ်ထုတ်ပစ်နေကြသည်နှင့်၎င်း၏ခမည်းတော်အရာ၌ကြွက်သားအတွက်ထုတ်ပေးထားတဲ့မှတဆင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ် thermogenesis အဖြစ်လူသိများသည်။ ဒါဟာအလွန်နှေးကွေးသောနှုန်းထားဖြင့်သော်လည်းတစ်ဦးသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
2 ။ အစာစားချင်စိတ်အရှုံး
လူအများစုဟာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာသာယာဝပြောရေးမှအာဟာရအထောက်အကူဖြစ်စေမဟုတျကွောငျးကိုအနည်းဆုံးတစ်ခုခုအနေနဲ့အစာစားချင်စိတ်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သော Ice Cream, fries နှင့် cookies များကိုအဖြစ် Junk ပါဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာများအထူးသဖြင့်အလွန်အကျွံအဆီဆုံးရှုံးဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုမှဇာတိပကတိ၌စူးသောဆူးဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှုန်းဆုံးဖြတ်သည်ကွောငျ့ဖွစျသညျ အဆီဆုံးရှုံးမှု။ ဤမျှလောက်များစွာသောကယ်လိုရီကိုယူသောအခါ, ကြွက်သားတွေထက်အဆီသူတို့ကို converting ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်ခန္ဓာအဘို့ဤမျှလောက်ငွီးငှေ့ဖှယျဖြစ်လာသည်။
တဦးတည်း Synephrine HCL ကြာသောအခါ, အစာစားချင်စိတ်ကိုအလွန်နှိမ်နင်းသည်။ ဒါကစစ်ဆေးမှုများပေါ်တွင်တင်နေသည် Junk သည်တဦးတည်းရဲ့တောင်းပန်အတွက်အကျိုးရှိသည်။ တစ်ဦးချင်းစီသည်ယခုအခါကိုယ်ခန္ဓာကိုမှကျန်းမာဖြစ်ကြောင်းအစားအစာများကိုယူပြီးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင်တို့ရှိသမျှနည်းလမ်းမှတဆင့်ဒီအောင်မြင်ရန်သေချာပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ထို့ကြောင့်, သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်အဆီထိန်းချုပ်ထားများအတွက်ဖြည့်စွက်အဖြစ် Synephrine ၏အသုံးပြုမှုကိုဖွင့်ကိုအကောင်းဆုံးအရာပါပဲ။
3 ။ သာ. ကောင်း၏ကြွက်သားဂလူးကို့စလွှာမှ
Synephrine ၏အသုံးပြုမှုကိုခန္ဓာကိုယ်ကဂလူးကို့စများ၏စုပ်ယူသုံးစွဲမှုမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကအဓိကနည်းလမ်းနှစ်သွယ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်။ သွေးကြောအဆီ retention ကိုအတွက်ပိုလျှံဂလူးကို့စတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပျက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Synephrine ၏အသုံးပြုမှုကိုသွေးထဲမှာပိုလျှံဂလူးကို့စဖျက်သိမ်းနှင့်အရိုးကြွက်သားလွှဲပြောင်းကြောင်းသေချာပါလိမ့်မယ်။ ဒီမှာဂလူးကို့စကိုအလွယ်တကူကြွက်သားကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်မှာ Synephrine သကြားအလျင်အမြန်ဖြိုဖျက်လိမ့်မည်ကဲ့သို့သောစွမ်းအင်အတွက်အရိုးကြွက်သားရလဒ်များကိုမှဂလူးကို့စများ၏အပြောင်းအရွှေ့ဆောသေချာပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်စွမ်းအင်တစ်ဦးချင်းစီပိုလျှံဆီဆုံးရှုံးဖို့ကို enable လိမ့်မည်ဟု key ကိုဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များမောင်းနှင်ဘို့အရေးကြီးသည်။
4 ။ AIDS ရောဂါ glycogenesis
အသည်းကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အဆီ၏ပျက်ပြားအတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ကြောင်းခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Synephrine ၏အသုံးပြုမှု glycogenesis သွေးဆောင်ဖို့အသည်းသြဇာလွှမ်းမိုး။ ဤသည်သိသာထင်ရှားသောလုပ်ငန်းစဉ်အားမဟုတ်ရင်အလွန်နှေးကွေးသောနှုန်းထားဖြင့်ပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။ အဘယ်အရာကို Synephrine HCL မ lipolysis ၏ဖြစ်စဉ်ကိုအလျင်အမြန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
5 ။ ထိန်းချုပ်မှုဆီးချိုရောဂါအတွက်ကူညီပေးသည်
ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပိုလျှံသကြားကိုမီးရှို့ကာအသုံးဝင်သောပုံစံကပြောင်းလဲထဲမှာနှေးကွေးဖြစ်တဲ့အခါ, ဆီးချိုရောဂါ Development ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင့်မားသောဖြစ်ကြသည်။ Synephrine ၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုန့်သတ်ချက်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့် setting နှင့် ပတ်သက်. အဖြေတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သုံးတဲ့အခါခါးသီးလိမ္မော်သီးအပွထံမှဆင်းသက်လာသည့်ဖြည့်စွက်စွမ်းအင်ဖြန့်ချိဖို့ကြား၏ပျက်ပြားအားပေး။
6 ။ တိုးတက်လာသောအစာခြေ
ဖြည့်ဆည်းကြသူတစ်ဦးချင်းစီ Synephrine HCL သုံးပြီး အသုံးပြုမှုကာလအတွင်းရင်၏အနည်းဆုံးဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒါ့အပြင်ဒီမျက်နှာစာပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထိရောက်မှုကိုသိပ္ပံနည်းကျကျောထောက်နောက်ခံပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
သို့သော်ပြောဆိုချက်ကို Synephrine အဓိကအားမှဆင်းသက်လာသောအနေဖြင့်ခါးသီးလိမ္မော်သီးအသီးအစာအိမ်ဆက်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့ဤမျှကာလပတ်လုံးအတွက်အသုံးပြုခဲ့တာကိုပေးသောအမြင့်ဆုံးဘွဲ့အထောက်အထားရှိပါတယ်။
7 ။ ခွဲစိတ်မတိုင်မီလျှော့ချကွော
ဤသည်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုလည်းသိပ္ပံနည်းကျကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယကျော်လွန်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်သက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ သို့သော်ခွဲစိတ်စစ်ဆင်ရေးမတိုင်မီ Synephrine ကိုအသုံးပြုကြသူတစ်ဦးချင်းစီအနည်းငယ်မျှသာကွောရှိသည်ဖို့တွေ့ပါပြီ။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးတစ်ဦးချင်းစီအထူးသဖြင့်အဓိကစစ်ဆင်ရေးမတိုင်မီနှစ်လိုဖွယ်သောအေးဆေးတည်ငြိမ်သဘောထားကိုရှိသည်ဖို့နိုင်ပါတယ်။
8 ။ တိုးတက်စိတ်ခံစားမှုနဲ့စွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်
Synephrine ၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးချင်းစီ၏ခံစားချက်နှင့်စွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်အတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေတွေ့ရှိထားသည်။ ကောက်ယူခဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုအရ, မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဤအကျိုးကျေးဇူးသက်သေပြခဲ့သည်။ ကြွက်မူးယစ်ဆေးသုံးပြီး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတည်ထောင်ရန်အခြေအနေများအမျိုးမျိုးအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။
ဤသည်ကိုပင်မိမိတို့၏နို့တိုက်ကျွေးရေးအလေ့အထထိခိုက်စေတဲ့အမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ရလဒ်။ အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်ကျန်းမာစိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ကြွက်ရေထဲမှာထားစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့သူတွေကိုအတူရေကူးသတိပေးခံရခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအလေးပေးကြွက်တွေကဒီအဆင့်ကာလအတွင်းအလွန်နှေးကွေးခဲ့ကြသည်။
သူတို့ဟာထို့နောက် Synephrine အောက်၌ဖုံးထားနှင့်သူတို့၏လှုပ်ရှားမှုအထူးသတိုးတက်ခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူခုနှစ်, ဖြည့်စွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသူတစ်ဦးချင်းစီကအသုံးမကြသူမြားကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကမြင့်မားသောဝိညာဉ်များအတွက်ဖြစ်ဖို့အလွန်အမင်းများပါတယ်။ Synephrine ဖြည့်စွက်အသုံးပြုသူများအများ၏စွမ်းအင်အဆင့်ကိုပုံမှန်ထက်မြင့်မားတိုးတက်ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
9 ။ အန္တရာယ်ရှိသောဘက်တီးရီးယားထိန်းချုပ်ရေး
အချို့လူများကတစ်ဦးပဋိဇီဝဆေးကဲ့သို့မူးယစ်ဆေးကိုသုံးခြင်းနှင့်အချို့အတိုင်းအတာအထိအထောက်အကူဖြစ်ဖို့သက်သေပြလျက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုထိုကဲ့သို့သောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအီး coli အဖြစ်ဘက်တီးရီးယားများ၏အဆင့်ဆင့်လျှော့ချဖို့ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဒီအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထိရောက်မှုသို့သော်အပြည့်အဝသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
11 ။ လျော့ချရောင်ရမ်းခြင်း
အဆိုပါဖြည့်စွက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာရသူခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်ရောင်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေလျှော့ချအတွက်အလွန်အမင်းထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများသိသိသာသာရောင်ရမ်းဆဲလ်များနှင့် cytokines ၏နံပါတ်လျှော့ချခြင်းဖြင့်ပြုမူ။ ဤအထိခိုက်ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ Anti-inflammatory မော်လီကျူး၏ activation အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။
ရောင်ရမ်းမော်လီကျူး၏ရှေ့မှောက်တွင်တိုက်ရိုက်ထိုကဲ့သို့သောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအဖြစ်အများအပြားမတည့်ရောဂါများ accelerates ။ အဆိုပါ Synephrine အသုံးပြုမှု ယင်း၏ activated ပြည်နယ်အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအဲန်အက်ဖ်-kB များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုလျှော့ချအတွက်အကူအညီအထောက်အပံ့များကို။
ထိုသို့ပိတ်ပင်ထားလှုံ့ဆော်တူသောအထက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အပေါငျးတို့သဒေသများဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးခြော ephedrine များအတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ အနိမ့်ဆေးညွှန်းမှာအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာတောင်သွေးတိုးစေလူသိများသော ephedrine နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသိသိသာသာလျော့နည်းသေစေလောက်ရှိပါတယ်ကြောင့်လည်းစင်ကြယ်၏ထုံးစံ၌ဒါပါဘူး။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုသည်တိုက်ရိုက်ဓာတုဗေဒထံမှမူးယစ်ဆေးဝယ်ယူရှောင်ရှားရန်အကြံပြုလိုတယ်။ အဲဒီအစား, တဦးတည်းကိုလုံခြုံစွာမူးယစ်ဆေးသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုပေါ်ညာဘက်ကိုအကြံဉာဏ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအရာကိုအောင်မြင်ရန်မည်သူတစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်မီဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Practitioner သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
Synephrine များအသုံးပြုမှုတွင်လည်းရုံကိုအခြားမူးယစ်ဆေးများကဲ့သို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအားဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ သို့သျောလညျးအသံထှကျခံရသူတို့ထဲကဖြစ်နိုင်ခြေကိုအသုံးပြုသည်သောသောက်သုံးသောအပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုသည်။
အဆိုပါဆိုးကျိုးများလည်းတဦးတည်းကိုအတူတကွဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူ Synephrine ၏စုံတွဲကိုအသုံးပြုခြင်းမရသောအခါပြံ့နှံ့ဖြစ်အလွန်အမင်းများပါတယ်။ အောက်ပါအဆိုပါဖြည့်စွက်၏အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်တွေ့ကြုံနေကြသော Synephrine HCL ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကိုနေသောခေါင်းစဉ်:
အဘယ်သူမျှမလှုံ့ဆော်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားကိုဖြစ်ပေါ်စေနှငျ့ ပတျသကျ. လုံခြုံ 100% ဖြစ်စဉ်းစားသည်။ Synephrine ဒီရှေ့တွင် ephedrine ထက်ပိုမိုလုံခြုံ option ကိုဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူသော်လည်း, ကလည်းမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားကိုဖြစ်ပေါ်စေဘို့အလားအလာသယ်ဆောင်။
ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားနှင့်အတူအမှုသည်အတိုင်း, Synephrine နှလုံးရောဂါဖြစ်စေတဲ့အတွက် ephedrine သကဲ့သို့သေစေလောက်ဖြစ်စဉ်းစားမရပါ။ သို့သော်သူတို့ကဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူအသုံးပြုသည်ဆိုပါကဖွံ့ဖြိုးဆဲသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်မြင့်တက်အခြေအနေကို၏အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ, တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အတူတကွဖိန်းဓာတ်နှင့်အသုံးပြုလျှင်မည်သည့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဖေါ်ပြခြင်းအချို့လေ့လာမှုများနှင့်အတူတစ်ဦးနှလုံးရောဂါဖြစ်ပေါ်စေသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်. တစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးငြင်းခုံနေတုန်းပဲရှိပါတယ်။
စိတ်ကြွဆေးခန္ဓာကိုယ်ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏မှုနှုန်းတိုးပွားလာခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ စိတျနှလုံးဟာခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းမှတတ်နိုင်သမျှအသှေးကိုရရှိရန်ကြိုးပမ်းအဖြစ်အများအားဖြင့်ဤနှလုံးခုန်နှုန်းမှာတစ်ဦးတိုးလာသဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ Synephrine HCL အမှုန့်များအသုံးပြုမှုဒီခဲကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်ပေမယ့်နှလုံးခုန်တစ်ခုတိုးစေဖွယ်ရှိသည်။
သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောဖိန်းဓာတ်အဖြစ်ကြင်နာ၏အခြားမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူလှုံ့ဆော်သုံးပြီးပြဿနာကိုအရှိန်မြင့်ဖွယ်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမှု၌, နှလုံးခုန်တောင်မမှန်ဖြစ်လာစေခြင်းငှါ, အစောပိုင်းအလုံအလောက်မကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာသေခြင်းဆီသို့ဦးတည်နိုင်ပါတယ်အတိုင်းဤဆိုးဝါးစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာမူးယစ်ဆေးခွဲစိတ်မတိုင်မီတင်းမာမှု minimize တချို့လူများကအသုံးပြုသည်။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုများသောအားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့်အလွန်နိမ့်ပြင်းအားမှာသာဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသောက်သုံးသောမြင့်မားသည်အခါ, ခွဲစိတ်ကုသမှုမတိုင်မီ Synephrine HCL အသုံးပြုမှုမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားသို့မဟုတ် cardiac arrest နဲ့ဖြစ်ပေါ်စေဖွယ်ရှိသည်။
အဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးစစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းဖွံ့ဖြိုးလျှင်ဤအသေဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးစစ်ဆင်ရေးမတိုင်မီ Synephrine သို့မဟုတ်အခြားလှုံ့ဆော်ရှောင်ရှားရန်အကြံပြုလိုတယ်။
အချို့ကိစ္စများတွင်ဆရာဝန်တစ်ဦးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစတင်မတိုင်မီအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်မူးယစ်ဆေးသတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ကစစ်ဆင်ရေးအတွင်းမှာပြဿနာတစ်ခုမှဖွံ့ဖြိုး စိုးရိမ်. ထိုကဲ့သို့သောအမှု၌ကဆေးမှူးရဲ့ညွှန်ကြားချက်မှတင်းကျပ်သောလိုက်နာမှုနှင့်အတူအမှုကိုပြုရပါမည်။
Synephrine ဖြည့်စွက်အသုံးပြုကြသောပြည်သူ့သည်အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရ။ သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ပြင်းထန်မှုအခြားတဦးချင်းအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အသုံးပြုသောသောက်သုံးသောသော့ချက်နှင့်အတူများစွာသောအမှုအရာပေါ်မူတည်သည်။ ဤအဆိုးကျိုးများ၏အချို့တို့ပါဝင်သည်:
ရင်ဘတ်ဝေဒနာ။ ဤသည်လက္ခဏာတစ်ခုယလေ့ကျင့်ခန်း session တစ်ခုအတွင်းမှာကြွက်သားစိတ်ဖိစီးမှုကနေရရှိလာတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုနှင့်အတူရောထွေးစေခြင်းငှါ။
အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသို့သော်ဖြည့်စွက်တာပေါ်တဦးတည်းကန့်သတ်ရန်ဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။ သုတေသနအလွန်အမင်းအသံထွက်ခံရသည့်ရောဂါလက္ခဏာမဆို၏ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နိမ့်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့ Synephrine သောက်သုံးသောအသုံးပြုသောအခါသာဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်။
နို့တိုက်မိခင်များအဖြစ်မျှော်သူတွေကိုပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ပတ်သက်. ကန့်သတ်သတင်းအချက်အလက်ရှိပါသည်။ ဒါဟာတဦးတည်းကိုအသုံးပြုခြင်းပြီးနောက်ဖွံ့ဖြိုးတံ့သောအရာကိုမသိစခွေငျးငှါကဲ့သို့သောအချိန်တွင်မူးယစ်ဆေးသုံးပြီးဝေးနေဖို့ထို့ကြောင့်အကြံပြုလိုတယ်။
Synephrine ထုတ်လုပ်သူရဲ့ preference ကိုပေါ် မူတည်. ပမာဏကွဲပြားအများအပြားကာယဗလဖြည့်စွက်တွင်ပါရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးအများဆုံးသောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင် 100mg အကြောင်းပါ။ ဒါကကိုယ်အလေးချိန်ရရှိနိုင်စွမ်းအလုံအလောက်သောက်သုံးသောဖြစ်စဉ်းစားသည်။
လူအများစုယေဘုယျအားဖြင့်အထက်ဖော်ပြပါလျှောက်ထားပေမယ့် Synephrine သောက်သုံးသောထိုသို့အသုံးပြုသူတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့စဉ်းစားသည်အဘယ်အရာကိုများအထက်န့်သတ်ချက်အပေါ်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ 30mg အကြောင်းကိုသကဲ့သို့အနိမ့်တဲ့သောက်သုံးသောအထူးသဖြင့်အခုမှစအဘို့လောက်ပေ၏။
စိတ်ကြွဆေး၏အခြားမျိုးနှင့်အတူဖြည့်စွက်အသုံးပြုကြသောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, သောက်သုံးသောလိုက်ဖက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တတ်နိုင်သမျှအနိမ့်ထားသင့်တယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဖိန်းဓာတ်အဖြစ်အတူတူနေတဲ့လှုံ့ဆော်နှင့်အတူ Synephrine ၏အသုံးပြုမှုမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားများနှင့်တိုးမြှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းအသုံးပြုသူ predispose စေခြင်းငှါထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသော်လည်း, ဤဆွေးနွေးငြင်းခုံပေါ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်။
ပင်အေးစက်အသုံးပြုသူများသည်ထက်မပိုသင့်ကြောင်းအကြံပြုထားတဲ့ငွေပမာဏကိုတစ်နေ့လျှင် 200mg ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမှတ်အသားအထက်ဘာမှအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စဉ်းစားသည်နှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူဆက်စပ်ဆိုးဝါးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖောင်ကြုံနေရ၏အန္တရာယ်မှာတစ်ဦးချင်းစီကိုတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ Synephrine သင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူချောမွေ့စွာသဟဇာတဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်အတူစတင်, 10mg မှ 20 အကြံပြုလိုတယ်။
ဒီကနဦးသောက်သုံးသောယူပြီးပြီးနောက်သင်ဖြည့်စွက်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့အချိန်ယူသင့်ပါတယ်။ ရှိသမျှကောင်း အကယ်. အကြောင်း 20mg ၏ဒုတိယသောက်သုံးသောနှစ်နာရီအကြာတွင်ဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။
အလုံခြုံဆုံးသောက်သုံးသောကြားကာလတစ်ကြိမ်နှစ်နာရီမူးယစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးနာရီအိပ်စက်ခြင်းမပြုမီမူးယစ်တာမှရှောင်ကြဉ်ဖို့, သို့သော်, အကြံပြုလိုတယ်။ အဆိုပါဖြည့်စွက်များသောအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ထိရောက်သောဖြစ်လာဖို့အကြောင်းကိုနှစ်ခုနာရီကြာပါတယ်။
ထို့ကြောင့်, သင်သည်သင်၏အိပ်စက်ခြင်းအပေါ်ထဲမှာပိတ်ဖို့အဖြစ် Synephrine ယူပြီးဖွယ်ရှိသင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူကြားဖြတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းအိပ်ပျော်ခြင်းဖမ်းရန်မတတ်နိုင်ကြလိမ့်မည်။
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ညာဘက် synephrine သောက်သုံးသောယူပြီး
ဆွေးနွေးမှုများအတွက်ထိပ်တန်းအကြောင်းအရာများ: သလိုမျိုးကက်ဖိန်းဓာတ် vs Synephrine
တစ်ဦး Synephrine / ဖိန်းဓာတ်ပေါင်းစပ်စိတ်ချရသနည်း
စားသုံးတဲ့အခါမှာကဖိန်းဓာတ်တဦးတည်းကိုပိုမိုနိုးဖြစ်စေသည်စဉ် Synephrine ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကဖြည့်စွက်နှစ်ခု၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆက်ကပ်ဖို့သူတို့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအဖြစ်ကဖိန်းဓာတ်နှင့် Synephrine ဆံ့။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာရည်မှတ်ကာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးငြင်းခုံခဲ့ သလိုမျိုးကက်ဖိန်းဓာတ် vs Synephrine; Synephrine နှင့်ကဖိန်းဓာတ်၏အသုံးပြုမှုကို။ အချို့လေ့လာမှုများနှစ်ခုလုပ်နိုင်တဲ့ပေါင်းစပ် ephedrine ဆင်တူသည်, ဤမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းရောစပ်၏ရလဒ်အဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြသည်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးဖွဲ့စည်းတက်အဆုံးသတ်ကြောင်းပြသပါ။
ဖင်လန်နှင့်ဂျာမနီတို့ကမကြာသေးခင်ကပြန်လွတ်လာကျန်းမာရေးအကဲဖြတ် Synephrine နှင့်ကဖိန်းဓာတ်ပေါင်းစပ်တိုးမြှင့်သွေးဖိအားနဲ့နှလုံးခုန်နှုန်း၏ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်ဖွယ်ရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကြောင်းမှတ်စုတွင်အချို့သောဥရောပအစိုးရအေဂျင်စီများကျန်းမာရေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၏ရလဒ်အဖြစ်စျေးကွက်ကနေနှစ်ခုဖြည့်စွက်ပေါင်းစပ်နှင့်အတူဖြည့်စွက်၏ဖယ်ရှားရေးအမိန့်ရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်အချို့သောလေ့လာမှုများ, ဥပမာ BfR ထင်မြင်ချက်အမှတ် 004 / 2013 အမည်ရ "အားကစားနှင့် Synephrine ပြီးတော့သလိုမျိုးကက်ဖိန်းဓာတ်ပါဝင်တဲ့အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုထုတ်လုပ်မှု၏ကနျြးမာရေးအကဲဖြတ်" တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်ကဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်များတွင်အသုံးပြုလျှင် Synephrine ဆိုနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးတွေ့ပြီ။
ဒါ့အပြင် Synephrine နှင့်ကဖိန်းဓာတ်တူအကျိုးကျေးဇူးများကိုပူဇော်သည်ဟုယုံကြည်သူလူဦးအပိုင်းလည်းမရှိ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့နှစ်ဦးစလုံးစိတ်ကြွဆေးများမှာပေမယ့်, သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြပြီးသူတို့၏ဆိုးကျိုးများဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်သည်။
ကဖိန်းဓာတ်ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်, အစာခြေစနစ်နှင့်သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကသက်ရောက်သည်။ ကဖိန်းဓာတ်အသုံးပြုမှု၏ရလဒ်များကိုသတိပေးချက်များ, နိုးနိုးကွားကွားနှင့်စိတ်ဓါတ်များတိုးတက်မှုများပါဝင်သည်။ ၎င်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး Jitter, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်အဖြစ်စိတ်တိုတာတွေပါဝင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Synephrine အများအားဖြင့်တစ်ဦးတိုးလာဇီဝြဖစ်, စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နှင့်အာဏာအတွက်ရရှိလာတဲ့, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်သက်ရောက်သည်။
ထို့ကြောင့်, Synephrine နှင့်ကဖိန်းဓာတ်အမျိုးမျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ကြွဆေးဖြစ်ကြသည်။
သငျသညျ Synephrine ဖြည့်စွက်လိုရှိပါသလား သတငျးကောငျးကိုသငျသညျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ အွန်လိုင်း Synephrine ဝယ်ဖို့, နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်, ကံမကောင်း, အွန်လိုင်းကိုရောင်းအရည်အသွေးမမီတဲ့ဖြည့်စွက်ရှိပါတယ်နှင့်သင်အလွယ်တကူစစ်မှန်သောသူတွေကိုမှသူတို့ကိုခွဲခြားမရပေလိမ့်မည်။
ကဲ့သို့သောမှာ, သင်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော, ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အွန်လိုင်းရောင်းချသူ, ဖြစ်နိုင်ရင် Phcoker.com ထံမှ Synephrine ဖြည့်စွက်ဝယ်ထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာတွင် Phcoker.com ထံမှ Synephrine ဝယ်ဖို့ကိုလိုက်နာပါမယ်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများရဲ့:
အမှု၌သင်တို့, တစ်ဦးအကျဉ်းတိုတိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာအတွက်ဖြည့်ပါကမတင်ပြရန်လိုအပ်သည်။ Phcoker ရဲ့အထူးကုသင့်ရဲ့အမိန့်မှအတည်ပြုခြင်းရှိမရှိတည်ထောင်ရန်ဖို့ထွက်ဖြည့်ပုံစံကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
သင်ကအွန်လိုင်း Synephrine ဝယ်ဖို့သည်မည်မျှလွယ်ကူသောတွေ့မြင်?
ကောက်ချက် Synephrine အပေါ် (5985-28-4)
တစ်မ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရမှာတော့ Synephrine အလေးချိန်ဖြတ်တောက်အတွက်အသုံးပြုရန်ပြီးပြည့်စုံဖြည့်စွက်အပေါငျးတို့သ boxes တွေကိုလူမိုက်ကံကောင်း။ ဒါဟာအလွန်ပျော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်, ဤကလေ့ကျင့်ခန်း session တစ်ခုအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအဆင့်ဆင့်တိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူမဆိုအားကစားသမားများအတွက်စံပြပူးတှဲစေသည်။ ဒါဟာချောမွေ့စွာတစ်ချိန်ကအလွန်အမင်းမှာပါတဲ့ ephedrine အစားထိုးခြင်းနှင့်သွေးတိုးဖွံ့ဖြိုးဆဲမှုအန္တရာယ်ကိုမပါဘဲတဦးတည်းအမြင့်ဆုံးရတဲ့အတှကျပင်ပိုကောင်းအခြားရွေးချယ်စရာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
Akhlaghi, အမ်, Shabanian, G. အ, Rafieian-Kopaei, အမ်, Parvin, N. , Saadat, အမ်နှင့် Akhlaghi, အမ်၏ Citrus aurantium အပွင့်များနှင့် preoperative စိုးရိမ်စိတ်။ ဗြာ Bras.Anestesiol ။ 2011; 61 (6): 702-712 ။
ကွေး, အက်စ်, Padula, အေနှင့် Neuhaus, ဂျေအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Citrus aurantium ၏ထိရောက်မှု။ Am.J.Cardiol ။ 11-15-2004; 94 (10): 1359-1361
ကမ့်ဘဲလ်-Tofte, JI, Molgaard, P. , Josefsen, K. , Abdallah က, Z. , Hansen, SH, Cornett, C တို့, Mu, အိပ်ချ်, ရစ်ချတာ, EA ၏, Petersen က HW, Norregaard, JC နှင့် Winther, နိုင်ဂျီးရီးယားတိုင်းရင်းဆေးအတွက်အသုံးပြုအဖြစ် K. ကျပန်းနှင့်ကို double-မြင်နိုင်ရှေ့ပြေးလက်တွေ့လုံခြုံမှု၏လေ့လာမှုနှင့် Rauvolfia-၏ Citrus လက်ဖက်ရည် Anti-ဆီးချိုထိရောက်မှု။ J ကို Ethnopharmacol ။ 1-27-2011; 133 (2): 402-411 ။
စားနပ်ရိက္ခာသိပ္ပံနှင့်အာဟာရ၏စွယ်စုံကျမ်း (ဒုတိယ Edition ကို), 2003 အတွက် R. ကော်စတာ, MBA ဘွဲ့ရ Gloria,
Ghanim H ကိုစိုင်း CL, Upadhyay အမ် et al။ လိမ္မော်ရည်တစ်ဦးက high-ဆီဥ, High-ဘိုဟိုက်ဒရိတ်သည်ဘောဇဉ်၏ proinflammatory အကျိုးသက်ရောက်မှု neutralizes နှင့် endotoxin တိုးနှင့်ခွန်ကောက်ကဲ့သို့အဲဒီ receptor စကားရပ်ကာကွယ်ပေးသည်။ Amer J ကို Clin Nutr ။ 2010; 91: 940-949
Stohs SJ ။ အတူဆက်စပ်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်အစီရင်ခံစာများအကဲဖြတ် ၏ Citrus aurantiumအောက်တိုဘာလ 2004 မှဧပြီလ 2009 ထံမှ (ခါးသောလိမ္မော်ရောင်) ။
Dragull K ကို Breksa AP, Satsuma Mandarin ထံမှသီးဖျော်ရည်၏ကာဣနခ Synephrine အကြောင်းအရာ (၏ Citrus unshiuMarcovitch) ။ J ကို Agric.Food Chem ။ 2008; 56: 8874-8878
ရောမ MC, Betz JM, ခရမ်းလွန်ထောက်လှမ်းနှင့်အတူအရည် Chromatography အားဖြင့် Hildreth ဂျေခါးသောလိမ္မော်ရောင်ကုန်ကြမ်းအတွက် synephrine ၏စိတ်ပိုင်းဖြတ်, ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူနှင့်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်: တစ်ခုတည်းဓာတ်ခွဲခန်းအတည်ပြု။ J ကို Amer Org စအိုဓာတုဗေဒပညာရှင် Int ။ 2007; 90: 68-81
Mercolini L ကို, Mandrioli R ကို, Trere တီ et al။ ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင် adrenergic Amin ၏အစာရှောင်အီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ၏ Citrus aurantiumအသီးနှင့်ဓါတ်ဖြည့်စွက်။ J ကိုစက်တင်ဘာသိပ္ပံ။ 2010; 32: 1-8
Haaz S က, Fontaine KR, Cutter, G, Limdi N. et al. ၏ Citrus aurantiumအဝလွန်နှင့်အဝလွန်ခြင်း၏ကုသမှုနှင့် synephrine alkaloids: update တစ်ခု။ အဝလွန်ခြင်းဗျာ 2006; 7: 79-88
Higgins, JP, Tuttle, TD နှင့် Higgins, CL စွမ်းအင်အဖျော်ယမကာ: အကြောင်းအရာနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု။ Mayo အဘိဓါန် Clin proc ။ 2010; 85 (11): 1033-1041 ။
Kaats, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Miller ကအိပ်ချ်, Preuss, HG နှင့်၏ Citrus aurantium ပါဝင်သော Stohs, SJ တစ်ဦးက 60day ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာထိန်းချုပ်ထားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုလေ့လာမှု (ခါးသောလိမ္မော်ရောင်) extract လုပ်ပါ။ စားနပ်ရိက္ခာ Chem Toxicol ။ 2013; 55: 358-362 ။
p-synephrine နှင့်ကဖိန်းဓာတ်၏ဘေးကင်းမှု၏ Lynch ခကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ Intertek-Cantox အစီရင်ခံစာ, 2013; 1-20 ။
004 နိုဝင်ဘာလ 2013 ၏အားကစားနှင့် synephrine နှင့်ကဖိန်းဓာတ် BfROpinion အမှတ် 16 / 2012 ်ကိုယ်အလေးချိန်ထုတ်ကုန်များ၏ကျန်းမာရေးအကဲဖြတ်,